Fahavitan'ny fitokana-monina :: Efa nody any an-tranony i Marion • AoRaha
Natoka-monina teny amim’ny Hôtel A&C Ivato i Marion, nanomboka tamin’ny 19 marsa 2020 ka hatramin’ny alakamisy 2 avrily lasa teo. Notiliana ny toe-pahasalamany ary voamarina fa tsy mitondra ny tsimok’aretina « Covid-19 » ny lehilahy. « Tonga soa aman-tsara ato an-trano. Efa vita fitiliana ary tsy nahitana fambaran’aretina. Misaotra an’Andriamanitra, dia mirary antsika rehetra mba harovany daholo », hoy i Marion.
Nahazo taratasy fanamarinana ny fahavitan’ny fitokanamonina nosedrainy avy amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka ity mpanakanto ity. « Taorian’ny fizahana ny toe-pahasalamany, tamin’ny 31 marsa lasa teo, ny olona voatonona anarana etsy ambony dia afaka mamonjy ny trano fonenany ary tsy hatahorana ny mety hanohintohinany ny fahasalamam-bahoaka », araka ny voarakitra ao anatin’ilay taratasy fanamarinana, izay nozarain’ity mpanakanto ity tao amin’ny tambajotran-tserasera “Facebook”.
Raha tsiahivina, nikasa hanatanteraka fitetezam-paritra mandritra ny roa volana tany Eoropa i Marion, niaraka tamina mpanakanto malagasy telo hafa, tamin’ny volana marsa lasa iny. Voatery nofoanana ny ankamaroan’ireo fampisehoana noho ny fisian’ny valanaretina « coronavirus ». Anisan’ireo olona niverina teto an-tanindrazana talohan’ ny fotoana nanakatonan’ny fanjakana malagasy ny sisin-tany ry zareo, ary niatrika an’io fitokana-monina io.
Fifindran’ny coronavirus :: Mihatanora ireo marary avy amin’ny fifampikasohana
Finoana sy fankalazana :: Mikasa hampihemotra ny Paska ny FLM